Hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya oo 18 xubnood ku kordhiyay aqalka sare - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaHoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya oo 18 xubnood ku kordhiyay aqalka sare
December 25, 2016 Puntland Mirror Somalia 1
Shirka madasha qaran ee u dhaxeeya hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya sidoo kale loo yaqaan Madasha Qaran oo Muqdisho shir ku yeeshay ayaa sheegay in xubnaha cusub ee aqalka sare ay ku kordhiyeen 18 xubnood oo cusub, sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen.
Xubnaha cusub ayaa si siman loogu qeybiyay maamul goboleedyada dalka ka jira sida lagu qeexay bayaanka.
1. Somaliland——–11 kursi————–3 kursi——————14 kursi
2. Puntland———-11 kursi—————3 kursi—————-14 kursi
3. Galmudug——–8 kursi—————-3 kursi——————11 kursi
4. Hirshabeelle—–8 kursi—————-3 kursi——————11kursi
5. K/Galbeed——-8 kursi—————-3 kursi —————–11kursi
6. Jubbaland——-8 kursi—————-3 kursi——————11kursi
18-ka Xubnood ee cusub ayaan baarlamaanka maamul goboleedyadu dooran doonin sidii kuwii hore, waxaana toos u dooran doona madaxweynayaasha maamul goboleedyada.
Xildhibaanada aqalka sare ayaa horey uga koobnaa 54 xubnood balse hadda waxay noqonayaan 72 xubnood.
Diyaarad milatari oo Ruushku lahaa oo ku burburtay Badda Madow
Mohamed mursal dahir says:
3da punland iyo somaliland loo kordhiyay yaa qaaatay tolooooow beelihii dulmanaa ee soool iyo sanaag wax malaga siiyay sxpayaaàaaaaal
Alla somalia maxa caddaalad darro taalla yaaaab